ZEC Inoti Inoda Mari Inoita $274m Ichashandiswa Musarudzo dza2018
Chikunguru 18, 2017
Komisheni inoonarinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission (ZEC) rinoti rinoda mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekushnda musarudzo dzakatarisirwa gore rinouya.
Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusimudzirwa kwemadzimai, nekuenzaniswa kwemikana, sachigaro weZEC, Amai Rita Makarau, vati vane tarisiro yekuti hurumende ichavapa mari yesarudzo iyi kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nematambudziko emari.
Amai Makarau vabvumawo kuti mari yavari kuda iyi inotyisa sezvo yakawanda
Vachitaura nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi musarudzo dza2018 idzi, Amai Rita Makarau vati kunyange hazvo bumbiro remitemo richitaura zvekuenzaniswa kwemikana, pari zvino hapana mutemo unopa ZEC masimba kuti irambe mazita avanenge vapihwa nevemapato ezvematongerwo enyika kana pasina kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Sachigaro wekomiti iyi, Amai Biata Beatrice Nyamupinga vebato reZanu PF, vachimiririra Goromonzi West mudare reparamende, vatiwo senhengo dzeparamende havatarisiri kuti ZEC ingotarisa vanhukadzi vasingapiwi mikana yakaenzana nevanhurume.
Amai Nyamupinga vakurudzirawo nhengo dzeZEC kuti dzidzidze kunyika dzakadai seRwanda kuti vanoenzanisa sei mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi panguva dzesarudzo
Amai Makarau vaudzawo nhengo dzeparamende kuti sangano ravo harina simba rekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kwete. Amai Makarau vakurudzirazvizvarwa zveZimbabwe zvine zvitupa zvakanzi “Alien” kuti vaende kwaRegistrar Generai kunogadzirisa zvitupa zvavo.
Amai Makarau vati pachatanga chirongwa chekunyoresa vavhoti havazobvumi kunyoresa vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti munhu haasi chizvarwa cheZimbabwe.
Amai Makarau vati vanhu havasati vatanga kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dza2018 asi vakatiwo gwaro revavhoti idzva rinenge ravapo muna Zvita.
Vari paMudyandigere Vononga Svosve Muromo
Vakawanda Votenda America neKuzvipira Kuramba Ichitsigira Chirongwa cheMandela Washington Fellowship
VaMnangagwa Vobayiwa Nhomba keChipiri kuKwekwe